> Resource > Mac > Sidee si ay u gudbiyaan Music ka iPod taabto si Lugood on Mac
Lumay music oo dhan ku Lugood Library on Mac? Ama iibsaday ah computer cusub Mac oo aad rabto inaad ka iPod xiriiri wareejiyo music in Lugood on Mac? Haddii ay sidaas tahay, aad tahay meel sax ah. Lugood kaliya kuu ogolaanaysaa inaad ku wareejiso Lugood iibsaday music ka iPod taabto si Lugood. Sida songs, kuwaas oo aad si toos ah u soo bixi inay iPhone ama goolka ka saaxiibadaa iPhone, weligiin baad iyaga waayi doonaa. Si looga fogaado dhibaato iyo aad u hesho heesaha oo dhan ku iPod taabto si Lugood on Mac, waa inaad raacdaa tallaabooyinka hoose. Maqaalkani waa hage ah tallaabo-tallaabo ah oo sida loo nuqul music ka iPod taabto si Lugood Library on Mac.
Tallaabada 1. Download iPod xiriiri in software Lugood Mac
Click Download si aad u hesho TunesGo Wondershare (Mac) . Waxay kuu ogolaanaysaa inaad ka iPod xiriiri wareejiyo music oo dhan si ay u Lugood on Mac la click hal ama wareejiyo gaar ah iPod xiriiri music in Lugood on Mac. Ka dib markii ay soo degsado, rakibi app this on your computer Mac. Haddii aad leedahay PC ka socda nidaamka ka hawlgala Windows ,, waxaad isku dayi kartaa Wondershare TunesGo (Windows) in ka taabto iPod ay u Windows PC wareejiyo music .
Tallaabada 2. Isku aad iPod xiriiri Mac
Isticmaal cable USB ah in ay ku xidhmaan aad iPod xiriiri Mac iyo abuurtaan TunesGo (Mac). Tani waxay la xiriiri iPod music in software Lugood Mac ogaan doonaa iPod taabashada toos ah, soo bandhigeen ay info uu furmo suuqa laga bilaabo. Wondershare TunesGo (Mac) si buuxda u taageersan iPod xiriiri 5 iyo iPod xiriiri 4 socda ee macruufka 5/6/7/8/9.
Tallaabada 3. Transfer music ka iPod taabto si Lugood on Mac
Bedelka oo dhan music ka iPod taabto si Lugood on Mac
ka dib aan ogaanno aad iPod taabto si guul ah, TunesGo (Mac) muujiyaan doonaa iPod taabto. On line hoose ee suuqa kala bilaabin, waxaa jira xal: Si Lugood . Waxaa Riix si aad u hesho hadal pop-up ah. Waxay kuu sheegi doonaan sida heesaha iyo playlists badan oo ku saabsan iPod taabto waa ka baxsan aad Lugood Library. Riix dhoofinta , kuwaas oo heeso kaliya ee aad iPod taabto waxaa loo wareejin doonaa Lugood on Mac. Habkaani waxaa laga heli karaa in uu furmo Music sidoo. No doonistii nuqul ka jira.
Bedelka music soo xulay iPod taabto si Lugood on Mac
Mararka qaarkood, laga yaabo in aad rabto in lagu wareejiyo dhowr heeso dilaaga ka iPod taabto si Lugood on Mac. Haddii ay sidaas tahay, waa in aad guji Music kooxda column bidix. Markaas, furmo Music ah, hubi songs ee guddiga tagay oo guji dhoofinta in Lugood .
Fiiro Gaar ah: Waxa aad arki karto walxood Lugood muuqan hore ee heesaha qaarkood. Tani waxay muujinaysaa songs, kuwaas oo labaduba ka jiraan on your iPod taabashada iyo Lugood.
Daawo Video ah si ay u gudbiyaan iPod Music taabto si Lugood on Mac
Isku day TunesGo (Mac) software ay u guuraan music ka iPod taabto si Lugood on Mac!